Nke a bụ otu ịgbakwunye ihe atụ na Akụkọ Gị Ga-ere | Martech Zone
Monday, April 6, 2015 Tuesday, April 7, 2015 Douglas Karr
Ihe atụ kachasị atụ anyị na-eji mgbe anyị na-ere ọrụ anyị, na-akọwa usoro anyị, na ịdebe atụmanya na atụmanya anyị na-atụle ịkwụsị. Ugboro ugboro, anyị na-anụ site na ndị ahịa kwuru:
Anyị gbalịrị [fanye usoro ịzụ ahịa] ma ọ naghị arụ ọrụ.
Ogologo oge ole ka ị gbalịrị ya? Kedu ka imere nke ọma? Kedu ụdị ego ị mere? Ka anyị tụlee ego ezumike nka gị… ọ bụrụ na ị gbalịrị ya otu ọnwa, ezuteghị onye na-ahụ maka ego, wee tinye ego narị ole na ole, kedụ nke ọma ị chere na ị ga-ala ezumike nka?
Ihe atụ na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ndị ọkachamara amatalarị etu ntinye ego si arụ ọrụ - ma ọ na-etinye ego na ebuka ma ọ bụ na-etinye ụfọdụ ego na 401k. Ọ na-esetịpụ atụmanya ogologo oge na anyị ekwesịghị inwe obi ụtọ ma ọ bụ mechuo ihu na elu na ala ma kama ilekwasị anya na-aga ogologo oge. Metaphors na-arụ ọrụ!
Ihe bụbu omenka ndị na-ede uri bụzi nkà nkwukọrịta maka onye ọ bụla chọrọ ịmetụta ndị ọzọ, ree ma ọ bụ kwenye.
a ozi sitere na Anne Miller, onye na-ekwu okwu na onye na-ekwu okwu okwu, na-ejegharị gị na uru niile, atụmatụ na ọbụna ihe atụ nke ire ere ahịa dị ukwuu.
Tags: atụmetaphorsNkwado ire ahịan'ireokwu
Ebumnuche asaa kpatara na ọdịnaya gị anaghị adaba na Millennials